VLC bụ nnọọ ihe kasị mma mgbasa ozi ọkpụkpọ dị gafee niile nyiwe. Ọ bụ ihe na-emeghe iyi software, nke dị dị ka a free download. The software akwado fọrọ nke nta niile ọdịyo na video format, site n'ebe dị anya karịa ihe ọ bụla ọzọ media ọkpụkpọ. Oge ọ bụla ya na mmepe na-anọdụ na-arụ ọrụ ọhụrụ version, ha na-ọbụna ihe ọzọ dị ike ọkpụkpọ. Ebe a na-ise ọhụrụ nsụgharị tinye n'ihu site VLC maka Mac na Windows.
Nkebi nke 1: VLC 2.2.1- Terry Pratchett
Nkebi nke 6: All nsụgharị nke VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ
Nke a version na-akakwa mma n'ụdị 2.2.0. Ọ fixes ọtụtụ okuku mbipụta, codec nke, regressions na ọtụtụ ndị ọzọ. O nwekwara maliteghachi okwu maka HD codec dị ka MP4, MKV n'elu netwọk nke a na-enweghị kpebiri a version. Ọzọkwa, nche bụ nnọọ mma. Mmepụta ka gbalịrị ime ka ndị ọzọ mụ site n'imeziwanye on ya ụzọ. Ịnwere ike ibudata site na-ewu ewu njikọ dị ka www.videolan.org, download.cnet.com, na softonic.com maka ma Mac na Windows.
Nke a version bụ ihe kasị mma mbipute dị na ọhụrụ otu. The isi nke version bụ na ọ na-enye gị ohere iji nọgide na ihe ziri ezi na ebe ị hapụrụ. Ọ mma nkwado maka ọhụrụ HD Koodu, opus, VP9 na H.265 / HEVC. Videos e si igwe na-akpaghị aka na-agba gburugburu iji zere vetikal video syndrome. Ke adianade do, VL Sub nwere ike ibudata site n'ime ngwa.
Ibudata site na njikọ ndị dị ka www.videolan.org, download.cnet.com na softonic.com maka ma Mac na Windows os.
Isi atụmatụ a version agụnye ofu nyopụta mbipụta na MP3, MKV na ngwaike nyopụta. Ọ bụrụ na Mac os o nwere mma QTsound kpọọ na ọdịyo ọwa iwu. Maka nche, ọ emelitere libpng na GnuTLS ọba akwụkwọ. Ọ nwere ọhụrụ ọdịyo na video ndapụta maka ma OS na Windows. Ọ bụ 4K njikere na ndị ọzọ na ọhụrụ media formats. Ịnwere ike ibudata software si www.videolan.org, cnet.com na softonic.com. Ha bụ ndị kasị pụrụ ịdabere na isi iyi.
Nke a version ẹkenam na ọhụrụ mma decoders, nke e mepụtara maka ọhụrụ formats HEVC na VP9. E nwere ngwaike nyopụta maka OS X iji VDADecoder. N'ihi na ma Windows na Mac, ọdịyo na video mmepụta management-akakwa mma.
Popular download enweta na-agụnye www.videolan.org, softonic.com, na cnet.com
Dabere na n'elu ikpo okwu, nke a na-enye ohere version ibuo nyopụta nke HEVC na Webm. Ị nwere nnọọ mma SPDIF na Audio ngwaọrụ management maka ma Windows na Mac. Ọ nwere mma windows installer na mmelite nsụgharị.
The download njikọ ị nwere ike iji bụ www.videolan.com na download.cnet.com.
6. All nsụgharị nke VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ
Niile nsụgharị nke VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ dị maka Windows na Mac. Ebe a bụ a ngwa ngwa lee anya na nsụgharị.
Dị nnọọ imelite gị VLC ọkpụkpọ ka ọhụrụ version na-enweta ihe ọhụrụ.
> Resource> VLC> nbudata kacha ọhụrụ Version nke VLC